ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၂၊ ဒုတိယပိုင်း) | MoeMaKa Burmese News & Media
ပါရီမောင်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၃ (အပတ်စဉ် တက်ဆက်မည်)
ARTICLE Part (2)
2 . Definate Article (Article défini) သိပြီး၊သေချာပြီးပစ္စည်းများ
( le , la , les ) လ၊လာ၊လေ
ပြင်သစ်စာရေးသားခြင်း၊ သို့မဟုတ် စကားပြောဆိုရာတွင် အစတွင် နာမ်ပစ္စည်းတခုဖြစ်သော ကား အကြောင်း ပြောဆို သည့် အခါ မသိသေးသော၊မသေချာသော Article Indéfini ဖြစ်သော un, une, des ကိုသုံး၍ ပြီး၊ သိပြီး၊ သေချာပြီးဖြစ်သော ကားအကြောင်းကိုပဲ ထပ်မံပြောဆိုသည့် အခါ Article Défini ( le , la , les ) ထဲမှတခုခုကိုသာထည့်သွင်းသုံးရမည်။
ဥပမာ – I haveacar . The car is small. ကျနော့်မှာ ကားတစီးရှိသည်။ ဒီကားသည် သေးသည်။
J’aiunevoiture.Lavoiture est petite. ရေ အယူးန်း ဗွါကျူး ။ လာ ဗွါ ကျူး အေ ပတိ ထ်
ထို့ကြောင့် အနည်းကိန်းဆိုလျှင် “ la voiture ” “ဒီကား” ဖြစ်ပြီး “ les voitures ” ဆိုလျှင် “ဒီကားတွေ” ဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။ ( ဟိုကား ၊ ဒီကား ဆိုပြီး နေရာပြဆိုသော အသုံးနှင့် မရောထွေး စေလိုပါ)
“ le voiture ” “la bureau” “ la restaurant” ဟုဘယ်တော့မှမရှိစေရပါ။
« le »သည်masculin ဖြစ်သော အဖိုနာမ် များအတွက်သာသုံးရန် definite article ဖြစ်ပြီး voitureသည်féminine ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
« la »သည်féminine ဖြစ်သော အမ နာမ် များအတွက်သာသုံးရန် definite article ဖြစ်ပြီး bureau (ရုံး) သည်masculin ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
« la »သည်féminine ဖြစ်သော အမ နာမ် များအတွက်သာသုံးရန် definite article ဖြစ်ပြီး restaurant (စားသောက်ဆိုင်)သည်masculin ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်ရာ မှန်ကန်သော အာတီကယ်လ် ကိုသာ ရွေးချယ် သုံးစွဲရပါမည်။
သက်မဲ့အရာဝထ္တုများ၏နာမ်များကိုအဖိုနာမ်၊အမနာမ်ပုံသေသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သဖြင့်အမြဲမှတ်သားပြီး အသံမှန်ထွက်ရန် အောက်ပါလင့် ကိုနားထောင်လေ့ကျင့်ပါရန်။
Le livre – ( လလိဗ်ရ်) the book ( ဗမာသံပီပီသသ “လ” မဟုတ်ပါ၊ခပ်ပေါ့ပေါ့အသံဖြင့် “လက်” ဟုထွက်ပါ) ဒီစာအုပ်
La voiture – ( လာ ဗွားကျူး) ဒီကား the car
Le stylo – ( လ စတီလို) ဒီဖေါင်တိန် the pan
La chaise – ( လာ ရှဲး ဇ် ) ဒီကုလားထိုင် the chair
Les tables – ( လေ တားဘ်လ် ) ဒီစားပွဲများ the tables ( ဗမာအသံထွက်အတိုင်း လေ ဟု အတိအကျထွက်သည်)
Le téléphone – ( လ တေလေဖွန်း ) တယ်လီဖုံး the phone
Les enfants – (လေ ဇွန်ဖေါင့်) ကလေးများ the children (နာမ်တွင် သရ «e» နှင့်စသဖြင့် အသံ ဆက်သွားပါသည်။ နောက်ဆုံးမှ အများကိန်းကိုပြသော « s »အသံလုံး ဝမထွက်ရပါ။
Voyelle များ(သရ) ဖြစ် ကြသော « a,e,i,o,u နှင့် h (အသံမထွက်) » တို့နှင့်စသောနာမ်များ၏ရှေ့တွင် le , la များ ကို သုံးသည့်အခါ ( les မပါဝင်ပါ ) Article Défini များဖြစ်ကြသော le , la တို့မှ “e” နှင့် “a” တို့ပျောက်သွားပြီး « l’ » ဖြစ်လာပါသည်။ထို့ကြောင့်ပြင်သစ်စာများတွင် l’amour , l’avion , l’ami စသည်တို့ကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ Le avion စာလုံးမှ L’avion ဖြစ်လာပုံကိုရှင်းပါမည်။
Avion (လေယာဉ်ပျံ) သည်အထီးနာမ် ဖြစ်သောကြောင့် သူ့အတွက် Masculin Article ဖြစ်သော “ le ” ကိုရွေးချယ်ရပါသည်။
သို့သော် article နှင့် nounကိုရေးလိုက်သောအခါတွင်သရ၂လုံးဖြစ်သောeနှင့်aတို့ထပ်နေသည့်အတွက်
Articleတွင်ရှိနေသောသရ «e»ကိုဖျက်၍ ဖျက်လိုက်သောနေရာတွင် “ ’ ” ကိုထည့်ပေးရပါသည်။
အလားတူပင် l’ami ( the friend ) ဒီသူငယ်ချင်း ဆိုသောစာလုံးတွင် le နှင့် amiတို့ပေါင်းသွားသည်ကိုသိနိုင်ပါသည်။
L’ amieဆိုသောစာလုံးတွင်အဆုံးသတ်ဖြစ်သော «e» ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းဟု သိရပါမည်။ ထို့ကြောင့် article သည် la ဖြစ်မည်ကို သိထားသင့်သည်။(သက်ရှိနာမ်များကိုသာ အဖို နာမ်မှ အမ နာမ်သို့ပြောင်းနိုင်ပါသည်။)
Article Contracte ဆိုသည်မှာ Article အာတီကာယ်လ်များသည် Proposition များနှင့်ပူးပေါင်းသွားခြင်းများကို ဆိုပါသည်။
Proposition « à » သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် « at,to » နှင့်တူပြီး « ၌၊ မှာ၊ တွင်၊ ဝယ်၊ က » ဟု အလွယ် ဗမာလိုမှတ်ပါ။
« de » သည် « of, from » နှင့်တူပြီး « ၏, မှ » ဟု ပြောချင်ပါသည်။ အသုံးပြုမှုပေါ်တွင်မှတ်သားခြင်းဖြင့် သဘောပေါက်လာပါမည်။
– à la မှ à la ( မပြောင်းပါ )
– à le မှ au
– à les မှ aux
– de la မှ de la ( မပြောင်းပါ )
– de le မှ du
– de les မှ des
သို့ပြောင်းသည်ကို မှတ်ရပါမည်။ သတိထားကြည့်ပါက အနည်းကိန်း ၊အမ အာတီကယ်လ်များ ဆိုလျှင် မပြောင်းသည်ကို တွေ့မည်။
ဥပမာ – à la , de la တို့သည် မပြောင်းကြပါ။
« သူမ ဈေးသို့ သွားသည်။ » ဆိုသောစာကြောင်းတွင်
Elle va au marché. အယ်လ ဗား အို မားခ် ရှေး ( Elle va à le marché ဟုမရေးရပါ )
Elle va – သူမ သွားသည် She goes
au – သို့ ( à le ) to the
marché – ဈေး market
( ဈေး ဆိုသောနေရာတွင် မိမိတို့ သိထားပြီးဖြစ်သော ကျောင်း၊ စားသောက်ဆိုင်၊ စူပါမားကက် စသဖြင့် အစားထိုးသုံးစွဲ သွားခြင်းဖြင့် ပြောလိုသော အကြောင်းအရာ၊ စာကြောင်းများကို တည်ဆောက် နိုင်ပါလိမ့်မည်။)
အကြမ်းအားဖြင့် မှတ်ရန်မှာ Noun အများစုသည် “e” ဖြင့် အဆုံးသတ်လျှင် အမနာမ် feminineဖြစ်၍ အစပြောသော အခါ “une” သုံးရပြီး ထပ်မံပြောသော အခါ “ la ” ကိုသုံးရပြီး အများကိန်းဖြစ်လျှင် “des”ဖြင့်သုံးရပါမည်၊၊
la moto ,la prison, le téléphone ကဲ့သို့စာလုံးအနည်းစုကိုသာမှတ်ရပါမည်။နာမ်များ၏ အခန်းတွင် ထပ်မံရှင်းလင်းသွားပါမည်။
နောက်ပိုင်း အခန်းများတွင် ဗီဒီယို ကလစ် သာ ပေး ထားပါက ဆက်လက် လေ့ ကျင့် သွား နိုင်မည်ဟု ထင် ပါသည်။ ပါရီမောင် အနေနှင့် ရှင်းလင်းချက်များကို အဓိကထား ရေးသားပြီး စာဖတ်သူ အနေနှင့် Youtube Link
(အကြံပေးလိုသည်မှာစာဖတ်သူစိတ်ကြိုက်အခြားလင့်များရှာဖွေလေ့လာပါကအသံထွက်ကောင်းမွန်သောပြင်သစ်အသံမှန် Native Speaker အသံကိုရွေးချယ်စေလိုပါသည်။)
(အာတီကယ်လ် ကို နာမ်များ၏ ရှေ့တွင် အမြဲထည့်ပြီး ပြောဆို ရေးသား ရသော်လည်း ချွင်းချက် အနေဖြင့် မထည့်ရသည့် အကြောင်းများကို ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်)
Article Indéfini ( un, une, des )
Article Défini ( le , la , les ) သင်ခန်းစာများကို ပိုင်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ပါ။
စိတ်ဓါတ်မကျအောင် ကြိုပြောထားပါမယ်။ နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာ ရှုပ်တာတွေမလာခင် အခုကတဲက ကျေညက်နေမှလျှင်မြန်လွယ်ကူစွာတတ်မြောက်မှာပါ။ ရှေ့မှာ တက်သွားမဲ့ အခန်းတွေမှာလဲ နောက်ကို ပြန်ပြီးဖေါ်ပြ ညွှန်းဆိုမှာပါ။ မကြာခင် ကြိယာသုံးစွဲပုံ Verb Form (Conjugaison) နဲ့ ကတ္တားပုဒ် Personal Pronoun (Pronom Personnel) သင်ခန်းစာတွေပြီးရင် စာကြောင်းတွေ ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ပြီး ပါရီမောင်နဲ့ ပြင်သစ်လို « ချတ် » ကြတာပေါ့နော်။
ပြင်သစ်လိုချက် တာကတော့ ပါရီမောင် မကျွမ်းကျင်ပါ။ နှုတ်ဆက်စကားများနဲ့နေ့စဉ်သုံးဝေါဟာရများတိုးပွားရအောင်လေ။ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဝေါဟာရတွေကတော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့ပဲပေါ့နော်၊ စကားမစပ်ရေးရဦးမယ်။
ဒီရက်ပိုင်း ပါရီမှာ မကြုံစဘူး ခါတိုင်းထက် နှင်းပိုကျလို့ ပါရီရဲ့ အဘိဓ္ဓါန် လို့ခေါ်ရမဲ့ မောင်ရင် ငတေ နဲ့ ပေါင်းပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ထွက်တာ -၃ လောက်ရှိတဲ့ အပြင်က အအေးဒါဏ် တော်တော် ခံလိုက်ရတယ်။ ပြင်သစ်ဘာသာအသံထွက်၊ အဓိပါယ် နဲ့ပါတ်သက်လို့ ကိုယ်တွေ့ရော ကြားဘူးတာပါ နောင်ကြုံမှ ရယ်စရာပြောကြတာပေါ့နော်။
( လာမဲ့ သင်ခန်းစာမှာ နာမ်များ (Les Noms ) အကြောင်း ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမယ်)
TheGeek - အမေရိကန်အစုိုးရစာကြည့်တိုက်တွေမှာ အီးဘုတ်တွေငှားနေပြီ